Ah Molly anga andinetsa! – Vanoda Zvinhu
Kwakapera tumazuva ndichabva ndarova pasi ndakananga kuKopje.
Kopje yakanga yakapenga, havisi vakadzi ivavo. Waita sarura ude, vaiti vakobvu, vatete, vatsuku, vatema tema, vechidiki nevabvezera.Vakadzi vakange vakazara munzira, kuzoti muFlats mavaitira basa,rakange riri jamba jamba, pamberi pe bhawa neNightclub, yaiva sarura ude vakange vakazara kuti shutu. Ndaka mira mira ndichiona kuti zvirikufamba sei. Vakadzi ava vaiita kunge hove, pavakandiona ndakamira ndega vakauya vachimhanya, vamwe vaiuya vakavhura madhirezi pamberi, vamwe vaiuya vakasimudza hembe kanaskirt magaro ese ari panze – vaitoita kunge vachandibvarura.
“Ko Rombe yako ndeipi” ndakanzwa kazwi kandaiziva, ndakatarisa kwaibva nezwi ndikaona ari Molly, kahure kekumaavenues kakandirovesa nyere pabench pasi pemuti.
“Iyi yakamira,Molly” iri kuda kugarirwa, yozorara irimumuromo” ndakapindura
“Ka1, Rombe, ngatibve pama hure akazara pano aya, anenge asati amboona mboro, handei kumba kwangu,” Molly akabva aseka kachikuwe achibva andibata ruoko ndokutanga kufamba akananga kumaflats ekuKopye.
Mainzi mumba naMolly, akange ari maketeni aiganhura ganhura one room. Waitoona vanhu vachikwirana kana kunzwa vachichemerera. “Ino ndiyo imba yebasa sahwira ende ndafara kukuona. Ndikupe chekunwa here, but unototenga ndiwe” Molly akabva aseka achitambisa magaro ake Molly akabva atanga kundibata bata achiisa maoko ake mubhurugwa rangu. Akaiburitsa ndokuibata achinge akabata musoro wenyoka, akapfugama ndokuiisa pazamu rake, ini ndokukovirira panyatso wezamu kusvikira munyatso wamira.
“Hona Rombe ini ndiri hure but unondinzwisa zemo, iwe neni tino connector”, Rombe iwe neni hapana zvecondom handiti unozvizivaka” Molly akawedzera
“Hunde mambokadzi” ndakapindura
Molly akabva abvisa kajira kaakange kakapfekwa ndichibva ndatokwira mukadzi. Ndakatunda zivisina nguva ndichibva ndaburuka kubva pamusoro paMolly. “Zvaitwa baba, nokuti uronyo wenyu kudya kwangu but ndo chii chawandita, hapana zvandanzwa apa”
Kamboro kakabva kaita manyemwe ndokubva kanyura mukati kunge pasina chinhu, ndakabva ndapfeka jean chopazi ndichibva ndabhadhara Molly $50.00 kuvhara maone. Akashamisika nekuti kuKopje chigwishu chaiita $2.00.
Molly akati “Rombe kana uchida rara, ini ndichiri kuda mboro isina condom” “mboro yako ndino ida nekuti haina kukurisa”
“Rega ndimbo buda panze, ndozodzoka kana ndikafunga zvakanaka”
“Asi usakwirise, iwe unoda beche zvakanyanyisa, ndinokuziva” akadaro Molly, “Rombe kana uchida shamwari yangu iyo iri apo, haisati yawana murume nhasi, huya utiise tese tiri vaviri”
“Vero pinda muno” akabva atomudaidza, “Shamwari yangu anonzi Vero, uyu muchinda anonzi Rombe, ngatiite chirombe tiri vatatu”
Shamwari yacho Vero, yakanga iri hure rinomisa mboro
Vero na Molly vakatanga kubatana batana, ndokubva vatotanga kusvirana. Molly akaenda pamusoro paVero ndokupinzana makumbo zvekuti mheche dzavo dzakagumhana. Vakatanga kukovirirana zvaiyevedza chose. Molly akabva atunda achibva arara akatarisa mudenga akavhura pakumbo. Vero akabva andibata mboro yangu ndokuizora tumafuta twaange turi mukanhodhoro, akaipurizira kaviri ichibva yamira. Akazora mushonga panyere yake neya Molly
“Ko chiiko chandazorwa nhai Molly” ndakabvunza because mboro yangu yaka mira ende ichiita kupisa.
“Mushonga wemusana ende unoita kuti usatunde, tinoushandisa pavanhu vanobhadhara mushe kuti vasazo demander mari yavo plus unoita kuti udhakwe mbichana”
“Manje mushonga uyu hauite, kungoubata chete, kana kuufema unotanga kushanda, manje ukazoshandisa direct worse, especially kuvakadzi” akawedzera Molly.
Vero akabata mboro yangu ndokuita kukotama achibva aisa mubeche rake nekumashure. Ini ndakaita basa sebasa uyezve ndakanzwa kuti after a short while ndakanga ndavekunzwa kutanga kudhakwa musoro uchitenderera. Ndaka kwesha Molly naVero ndichivachinjanisa.
Zvaiitika musi uyu zvinhu zvandaiona muma movie epono, uye zvinhu zvandaishuwira pandainge ndichifunga nyaya dzekusvirana. After a while ndakaona kuti ndazvitangira hondo isinga hwinike, ndakabuda mucurtain ravo ndichita zvekutiza, Molly naVero vakasara vachingo nanzvana nekukwirana chingochani.
Next story Kukwapura Nyini yechiMunambiya kuno kuHwange
Previous story Kukwira Landlady wemaZigaro mahombe!